Die Casting Aluminium Parts & Components - Serivisy famonoana maty ho an'ny aluminium - Casting Minghe
Serivisy fanariana aluminium maty
Ny aliminioma no singa metaly be indrindra ao amin'ny hoditry ny tany. Izy io dia manana fahaleovan-tena tsara, fahalefahana, fitaritana ary faharetana, volafotsy na volondavenona volondavenona ny fisehony. Io no fitaovana fanariana maty matetika satria mampiseho fahaizan'ny machinability tsara. Ny milina fanariana maty dia afaka manamboatra ampahany miavaka amin'ny alàlan'ny alim-bolan'ny alimina. Ny Die Casting dia safidy mety indrindra, ny tombony dia amin'ny fizotran'ny famolavolana, ary izany no avo lenta sy matevina manary aluminium. Ny alàlan'ny alim-bary avo lenta amin'ny alimina dia ampiharina amin'ny alim-bolan'ny alim-pito ao anaty lavaka famolavolana izay mitovy amin'ny famolavolana tsindrona Ny ampahany sarotra amin'ny endrika sarotra dia azo atao amin'ny alàlan'ny serivisy fanariana maty maty. Ny sombin-tsolika maty maty marimaritra iraisana dia misy: motera maotera fiara, sandry rocker, carburetor, trano fonenan-drano, trano fonosana, trano fonenana, trano familiana ary faritra hafa amin'ny famokarana sy maro hafa
Tombontsoa sy toetran'ny Die Casting Aluminium Material
- Fanamboarana: Manamora ny fahazoana ireo endrika sy endrika sarotra, manamora ny fanamboarana ny famoahana amin'ny fizotry ny famokarana manokana.
- Taham-bidy avo kokoa: ny famonoana alimina aliminioma dia mamela ny ampahany hamboarina amin'ny taha ambony kokoa noho ny metaly metaly hafa. Ny sela miasa robotic die cast dia ampiasaina koa hampitomboana ny fahombiazan'ny famokarana.
- Tanjaka maivana: ny fanariana aluminium dia manome ny lanjan'ny lanjany maivana sy ny tanjaka ambony.
- Vidiny ambany: Ny ampahany maty amin'ny alim-pito amin'ny aliminioma dia kely vidy kokoa noho ny metaly metaly hafa.
- Miovaova sy mahatohitra ny harafesina: ny fantsom-bolan'ny aliminioma dia be dia be ary manome fanoherana tena tsara amin'ny harafesina.
Serivisy fanariana maty miaraka amin'ny aliminioma - Mpanamboatra singa matihanina maty any China
Raha mitady mpivarotra hanome anao ny ampahany avo lenta amin'ny aliminioma maty ianao, ny MINGHE Casting dia iray amin'ny loharanom-pahalalana indrindra sy mora vidy indrindra miompana amin'ny famokarana mazava tsara ny alimina vita amin'ny alimina vita amin'ny aluminium amin'ny masinina mandroso miaraka amin'ny fenitra indostrialy avo indrindra sy ny kalitao premium. Miaraka amin'ny traikefa niasa nandritra ny 20 taona mahery, orinasan-tsipika fametrahana mazava tsara sy efa za-draharaha izahay any Shina, fanao isan-karazany ny fanariana aluminium mora arak'izay ilainao. Miasa ho an'ny fiara, fitaovana ara-pitsaboana, injeniera, elektronika, simika, fananganana, aerospace ary indostria bebe kokoa.
Ny famonoana maty aluminium dia niavaka tamin'ny orinasa MINGHE Casting Company nandritra ny 20 taona mahery. Ny serivisy fanariana aliminioma anay dia nanampy injeniera, mpamolavola vokatra ary mpanao mari-trano hitondra ny endriny miaraka amin'ny endrika kanto sy ny kalitao azo antoka.
Izahay dia ISO 9001: 2015 mpanamboatra fanariana maty maty alimina izay manampahaizana manokana amin'ny serivisy fanariana maty ho an'ny indostria sy orinasa manerantany. Ny fitaovanay dia mandrakotra saika ny filan'ny injeniera maty, ny famolavolana ary ny fampandrosoana izay ilain'ny orinasanao, ary ny fambolena alimina maty dia miorina amin'ny 9000 toradroa.
Fampahalalana momba ny famokarana alimina maty MINGHE
Manam-pahaizana momba ny alim-bary aluminium (casting avo lenta amin'ny alim-by | Aluminium Profile (Extrusion) | Fandefasana fasika | fanakanana)
Masinina fanariana vacuum maty ao an-trano
Masinina fanodinana pression avo lenta avy amin'ny aliminioma hatramin'ny 180ton ka hatramin'ny 3500 taonina, lanja farany ambany: 60kg (133pound)
Masinina cnc 50 napetraka ho an'ny milina fanariana milina, metaly, extrusion sns.
Tsipika famokarana vovoka, CMM, taratra X ao an-trano
Fitaovana fanariana aluminium maty marobe:
Fampiharana casting casting aluminium:
Ny ampahany aluminium aluminium dia azo ampiharina amin'ny fiara, elektrika, miaramila, fitsaboana, fiaramanidina, famokarana herinaratra, aerospace ary injeniera indostrialy
Tombony amin'ny serivisy fanariana aluminium maty
- Manaova fanaraha-maso feno sy fitiliana mandritra ny famokarana sombiny aluminium Die Casting.
- Fitaovana fanariana maoderina sy mandroso mba hahazoana antoka fa avo indrindra ny ampahany amin'ny fanariana maty aluminium.
- Masinina matihanina voaangona sy traikefa prototyping haingana, manome anao torohevitra matihanina sy mahomby indrindra.
- Manana ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary rafitra fikirakirana fitantanana mahomby ary manana fitaovana famokarana mandroso, ahazoana antoka fa afaka mahazo ampahany aluminium tsara indrindra amin'ny serivisy maty casting.
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny famoahana aluminium
Safidio ny serivisy fanariana aluminium maty tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany manaparitaka ny alim-bolantsika dia alefa any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanariana maty aluminium anao.